တရုတ်(၅)ဦးမှ ပလောင်မိန်းကလေးတစ်ဦးအား အုပ်စုလိုက် အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်(Ta’ang girl was raped by5Chinese men) ~ TA'ANG LAND
တရုတ်(၅)ဦးမှ ပလောင်မိန်းကလေးတစ်ဦးအား အုပ်စုလိုက် အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်(Ta’ang girl was raped by5Chinese men)
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မန်ဂျတ်ကျေးရွာမှ ဦးအိုက်ငိုဒါင်း + ဒေါ်အီကစ် တို့၏ အသက်(၁၆)နှစ် အရွယ် သမီးငယ်အား တရုတ်အမျိုးသား ငါးဦးတို့မှ အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းဝန်း အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။
၂၆ရက်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၁ခုနှစ် နံနက် ၂ နာရီအချိန်တွင် သိန္နီမြို့၊ ရက်ကွက်(၃)ရှိ တရုတ်အိမ်တွင် အိမ်ဖော်အလုပ်သမား အဖြစ်သွား ရောက်လုပ်နေသူ လွေးအီမန်အား သူမအလုပ်ရှင်၏ သားနှင့် သူငယ်ချင်းများက အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းဝန်း အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်ကသူမအားကျပ်ငွေ(၂၀၀၀၀)နှစ်သောင်း ပေးပြီး နေရပ်တို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်၊၊
အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်း၍မုဒိန်းကျင့်ခံ ရပြီးနောက် ထိတ်လန့်နာကျင်ခြင်း ကြောင့် စိတ်ခြောက်ခြားစွာဖြင့် ပြန်ရောက်လာသော သူမအားမိဘများ ကတွေ့သဖြင့် သူမကို ကွတ်ခိုင်မြို့ရှိ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ ပါသည်။
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးမှ “လွေးအီမန်က အသက် (၁၆)နှစ်ဘဲရှိသေးတယ် အခုလိုတရုတ်တွေက ၀ိုင်းပြီး အုပ်စုလိုက် အတင်းအဓမ္မလုပ်တာ တော်တော်ယုတ်မာတာဘဲ၊ ကလေးက နာကျင်လွန်းလို့ သူ့မိဘတွေက ကွတ်ခိုင်ပြည် သူ့ဆေးရုံမှာ တင်ထားရတယ် ဆေးရုံဝန်ထမ်းနှင့်ဆရာဝန်တွေက အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံသိပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး။ ပြီးတော့ရွာနှင့် ဆေးရုံအလှမ်းဝေးတာကြောင့် အစားအသောက်ပုံမှန်မရှိပဲ အခြားအသိမိတ်ဆွေတွေသနားပြီး လာရောက်ပေးကမ်းတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အစားအသောက်ကိုဘဲစားသုံးနေရတယ် နောက်ပြီး အဲဒီတရုတ်တွေက ငွေကျပ် နှစ်သောင်းပေးပြီး ပစ်ထားတယ်၊ အခု ဆေးရုံးတက်နေတဲ့အချိန် ထိဘဲ” ဟုပြောပြသည်။
လွေးအီမန်၏ မိဘများမှာ ဆင်းရဲပြီးပညာလည်း မတတ်ခြင်းကြောင့် ရဲစခန်းလည်းမတိုင်ကြားရဲဘဲ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီး အမှုဖွင့်ချင်သော်လည်း ဆင်ရဲပြီး ငွေကြေမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အမှုမဖွင့်နိုင်သေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Ta’ang girl was raped by5Chinese men
A 16 year old girl, the daughter of Oo Aik Ngeo Dang and Daw Ei Kit who are living in Northern Shan State, Muse district, Kut Kai Township, Man ject Village was gang raped by5Chinese men.On the 26th of January 2011 at about2AM,ason ofalocal employer and his friends raped Lway Ei Mun, who was working inaChinese house asadomestic worker in Theini City, quarter 3. Then, the employer gave her 20,000 kyat and sent her back to her village.
As she was raped by the group, she felt much physical pain and was so scared. When she came back to the village and her parents saw her they sent her to Kutkai hospital as they were so worried about her psychological and emotional state.
A source close to the victim said “ Lway Ei Mun is just 16 years old, and they raped her this way, this behavior is despicable. Her parents sent her to Kutkai Hospital because she feels so much pain, but even when the medical staff and doctors knew what happened to her, they did nothing for her. The distance between hospital and village is very far, she did not have food enough or regular meals, she only hadalittle food and some money which was given to her by her friends and other people who know and pity her. Then Chinese men left her with 20,000 kyat till she is on the hospital.
As her parents are poor and uneducated they are afraid to report the incident to the Police, they still do not know what to do. Tragically, even if they wanted to bring this case to the court, as they are poor and they do not have the money to pay the cost of court proceedings and therefore are unable to prosecute the perpetrators to try to get some justice for their daughter.